Nintendo na-aga n’ihu ọha mgbe o kpughere ihe a maara nye mmadụ niile | Gam akporosis
A na - enwe ozi ọma oge ụfọdụ na - egosi etu ụwa si arahụ mgbe ụfọdụ. Ara bụ nke Pokémon GO na-agbanwe omume nke ọtụtụ ndị mmadụ na mbara ala a, na ihe ọzọ na-enweghị isi bụ na ndị na-etinye ego ga-aga maka mbak Nintendo na ahịa ahịa na-eche na ọ bụ akụkụ nke onye omekome nke nnukwu ihe ịga nke ọma, mana ọ bụ n'ezie Niantic na-ezute mmepe na akụkụ nke ihe onwunwe nke egwuregwu a.
Ka anyị hụ, mgbe mwepụta nke Pokémon na ọtụtụ nde ndị egwuregwu malitere n'ime ntinye ya, ndị na-etinye ego gara ozugbo ịzụta nintendo mbak. Ugbu a bụ mbak nke ụlọ ọrụ akụkọ ifo a ha ebidola da mgbe ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na ọ naghị eme egwuregwu ahụ ma ọ naghị ekpebi ihe ọ bụla banyere ya, ya mere ndị na-etinye ego ga-eju ya anya site na Nintendo nkwupụta a na Fraịde gara aga.
Ka o sina dị, ọ bụ ezie na ọnụahịa Nintendo na-ada, ọ ka dị bara ezigbo uru ebe a tọhapụrụ Pokémon GO na ngwaọrụ mkpanaka. Ma nke ahụ bụ na ọbụlagodi na ọdịda ahụ, Nintendo nọ na ọnụọgụ ahịa 60% dị elu karịa mmalite nke egwuregwu vidiyo na July 6.
Izu a ọ ga-abụ ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya ga-enye nsonaazụ ya maka nkeji iri na ise n'izu a, ya mere ị ga - enweta echiche ka mma banyere mmetụta na etu ụlọ ọrụ si eme ugbu a.
Ihe doro anya bụ na ụfọdụ ndị nyocha ekwuola nke ahụ ndị na-etinye ego na-emeghachi azụ na okwu Nintendo, ebe ndị ọzọ maara na enwere ohere maka uto na obere Nintendo nke Niantico na Plọ ọrụ Pokémon.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Pokémon Go » Nintendo Shares Fall Mgbe Investors Chọpụta Ọ Zụlite Pokémon Gaa
Verizon zụtara Yahoo maka ijeri $ 4.830